Wazi njani ukuba umdlalo uyasebenza kwi-PC yam, kwi-Emulator.online ▷ 🥇
Ungazi njani ukuba umdlalo uyasebenza kwiPC yam
Ndazi njani ukuba umdlalo uyasebenza kwiPC yam? Unokufumana ngokulula ngoncedo lwezixhobo ezikhethekileyo ezinje ngewebhusayithi Ndingayiqhuba?. Ukuba awufuni ukuba ikhompyuter yakho ivavanywe, ungaya kwindlela yemveli yokuthelekisa iinkcukacha ngesandla.
Jonga apha ngezantsi ukuba ungabona njani ukuba iPC yakho ibuthathaka okanye iya kusebenza kakuhle ukuqhuba umdlalo.
Ngoncedo lwewebhusayithi ekhethekileyo
Kukho ezinye iiwebhusayithi ezikhethekileyo ngokuthelekisa iinkcukacha zekhompyuter yakho kunye neemfuno ezincinci ezifunwayo yimidlalo ephambili kwintengiso. OKANYE Ndingayiqhuba? yenye yezona zidume kakhulu, kuba nakho ukuqinisekisa ubumbeko kumatshini wakho ngokuzenzekelayo.
1. Vula ibrawuza oyikhethileyo uye kuyo Ngaba ndingayiqhuba?
2. Kwiphepha eliphambili, uya kubona ibhokisi yokukhangela apho kufuneka uthayiphe igama lomdlalo, njenge, I-Sims 4. Ukuba umdlalo uyafumaneka kwikhathalogu yephepha, iya kuvela kuluhlu. Cofa kwigama elibonakala liphepha impazamo yokukhangela;
3. Emva koko ucofe iqhosha Ungayiqhuba ukwenza uphando;
4. Kwiphepha elilandelayo, ubuncinci kunye neemfuno ezifanelekileyo zokuqhuba umdlalo ziya kuboniswa. Ukuze i-PC yakho ihlahlelwe, kufuneka ukhuphele ifayile evumela iwebhusayithi ukuba iqinisekise ubuchwephesha kumatshini wakho. Ukwenza oku, cofa iqhosha Ungayiqhuba ukukhuphela usetyenziso kwiwebhusayithi;
5. Vula ifayile ephunyeziweyo kwaye ugcine iphepha lewebhusayithi livulekile. Inkqubo izakuqala ngokuzenzekelayo ukuhlalutya umatshini wakho;
Kuxhomekeka kwisikhangeli, inkqubo iya kuboniswa emazantsi kwesikrini xa ukhuphelo lugqityiwe. Iya kufumaneka kuluhlu lokukhuphela lwe isikhangeli kwaye ngokuqinisekileyo kwifolda yendawo ekuyiwa kuyo.
6. Ixesha lokuchonga linokwahluka ukusuka kwimizuzwana embalwa ukuya kwimizuzu kwaye isiphumo siya kuboniswa kwiphepha lewebhusayithi oligcine livulekile. Ikuxelela ukuba umatshini wakho uneemfuno ezisezantsi kunye nezicetyiswayo ukuze umdlalo usebenze ngaphandle kweengxaki.
Ezinye iisayithi ukufumanisa ukuba umdlalo usebenza kwi-PC
I-PCGameBenchmark ikuvumela ukuba ufake ngesandla useto lwakho lwe-PC okanye ukhuphele isoftware ehlalutya ngokuzenzekelayo ukucaciswa komatshini. Emva koko khangela igama lomdlalo.
Ngaphandle kokuchongwa ngezihloko ze-EA, Ingxoxo yomdlalo inokhetho kwabanye abaphuhlisi. Njengesixhobo sangaphambili, ikuvumela ukuba ufake idatha ngesandla okanye ukhuphele usetyenziso oluqokelela ulwazi malunga nePC kwangoko. Ke, khangela nje umdlalo ofunwayo.
Enye indlela yokwazi ukuba umdlalo uza kusebenza okanye awuyi kusebenza kwi-PC yakho kukuthelekisa ngesandla iinkcukacha ze-PC kunye neemfuno ezincinci ezifunwa ngumdlalo. Isisombululo singathabatha ixesha elide kunewebhusayithi, kodwa kulula kakhulu ukuyenza.
Uyifumana njani imigaqo yePC
Unokufumana iinkcukacha zobuchwephesha kwikhompyuter yakho ngeendlela ezininzi. Eyona ilula kuzo kukubhala ixesha UMsinfo32.exe kwibhokisi yokukhangela yeWindows. Ngokuxhomekeke kuhlobo lwenkqubo, isixhobo sokukhangela siyafumaneka kwibar yesixhobo okanye kwimenyu yokuQala (ngokunqakraza kwi icon yeWindows).
Kwisiphumo sokukhangela, cofa UMsinfo32.exe ukuvula. Ukuba awukwazi, unokufuna Sebenzisa njengomlawuli. Ukubona ukhetho, cofa nje ekunene kwisiphumo.
Efestileni Ulwazi lwenkqubo, kwicala lasekhohlo lebar, cofa Isishwankathelo senkqubo. Ungalujonga ulwazi malunga inkqubo yokusebenza (1), iprosesa (2) mi inkumbulo (3).
Ukujonga ukugcinwa, cofa Ukugcina kwaye emva koko Units.
Ngapha koko, ukufumana imodeli yekhadi lakho levidiyo, cofa Izixhobo kwaye emva koko Ukuboniswa. Ukuba ikhompyuter yakho inekhadi elizinikeleyo kunye nekhadi elakhelweyo, idatha kuzo zombini ezi ntlobo iya kuboniswa.
Isikhokelo sethu Jonga iisetingi zePC icacisa indlela yokujonga iinkcukacha kwiinguqulelo ezahlukeneyo zeWindows. Buza ukuba uyafuna na ukufumana ulwazi ngakumbi ngalo mbandela.
Ukuba ufuna ukukhawulezisa inkqubo, ungasebenzisa inkqubo IngcacisonguCCleaner. Inguqulelo yasimahla inokuqinisekisa ngehardware kwaye ibonelele ngolwazi oluyimfuneko ukubona ukuba umdlalo uyahambelana na nomatshini wakho.
Landa nje, faka kwaye ucofe iqhosha Qhuba iNtetho. Kwimizuzwana nje, idatha malunga nesixhobo iyaboniswa, njengoko kubonisiwe ngezantsi. Ukongeza, kubikwa ubushushu beCPU kunye nekhadi levidiyo.
Thelekisa kunye nezona mfuno zisezantsi zomdlalo
Nje ukuba ubeneenkcukacha zobuchwephesha kwikhompyuter yakho, jonga nje ezona mfuno zisezantsi ziyimfuneko ukuze umdlalo usebenze kumatshini. Olu lwazi luhlala lufumaneka kwiiwebhusayithi zabaphuhlisi nakumaqonga abamkelayo.
Kwi-Steam, umzekelo, ulwazi lunokufumaneka phantsi kwecandelo Malunga nalo mdlalo. en Neemfuno zeeNkqubo, zezona mfuno zisezantsi nezicetyiswayo zokusebenzisa umdlalo kwiPC.
Kwimeko yeFifa 21, iziphumo zilandelayo ziyaboniswa:
Enye indlela kukusebenzisa iisayithi ezihlangabezana neemfuno ezisezantsi zemidlalo ephambili kwindawo enye. Khangela nje ngegama ukufumana into oyifunayo.
Ndingayiqhuba, i-PCGameBenchmark kunye neNgxoxo yoMdlalo inikezela le datha. Ngaphandle kwabo, kukwakho iphepha leMfuno zeNkqubo yeMidlalo.
Ezona mfuno zisezantsi x Iimfuneko ezicetyiswayo
Ezona mfuno zisezantsi zibonisa ukuba izixhobo zekhompyutha ziyakwazi ukuqhuba umdlalo. Nangona kunjalo, iya kusebenza ngcono, njengokuthamba kunye nemizobo ebhetele, ukuba iPC inezincomo ezicetyiswayo.
Inkqubo yokusebenza kunye nendawo yediski efunekayo ahluka phakathi kwezona mfuno zisezantsi nezicetyiswayo. I-RAM, iprosesa kunye nekhadi lemizobo zizinto ezinokwahluka kakhulu ukusuka kwelinye ukuya kwelinye.
Ezona zilulamileyo zilula nezilula ze-Android zokudlala kwiiPC ezibuthathaka
Izinketho zokurekhoda kwesikrini kwiPC ebuthathaka
Uyidibanisa njani ifowuni yakho kwi-TV engeyiyo eye-smart ngeendlela ezi-5 ezahlukeneyo
Iithayili, isitaki, okanye i windows ezifakwe ngaphakathi Windows 10
Uyenza njani into yokubona ifoto ngefowuni kunye nePC
Uyazi njani ukuba i-iPhone yeyokwenyani okanye ingeyonyani kwaye ungalahlekiswa
Iinkqubo ezisi-8 zokwenza imidlalo kwi-PC nokuba ungazi ukuba zisebenza njani
Abona babukeli beefoto babalaseleyo ukubuyisela usetyenziso lweWindows kwi- Ivenkile yeWindows
Inyani okanye iindaba ezingeyonyani: ungazixelela njani ukuba iindaba zibubuxoki okanye ziyinyani
Ungazithumela njani iifoto kunye neeVidiyo kumabali e-Instagram kwi-PC kwi-2020
Ikhibhodi ayimiselwanga-indlela yokusombulula ingxaki kunye nokulungisa ingxaki